सपनामा संभोग गरेको , राम्रो हो कि नराम्रो ? – Todays Nepal
सपनामा संभोग गरेको , राम्रो हो कि नराम्रो ?
के तपाईले पनि कुनै परपुरुष वा परस्त्रीसँग संभोग गरिरहेको सपना देख्नु हुन्छ ? वा आफ्नै पतिरपत्नी वा प्रेमीरप्रेमिकाका साथ यौन क्रिया गरेको सपना पो देख्नुहुन्छ कि ? सबैले सपना देख्छन् र सपनामा अनेक कुराहरू साँच्चै भएको जस्तो गरेर अनुभव गरिन्छ ।
तर सपना यस्तै देख्छु भनेर देख्न भने सकिदैन त्यसैले सपनामा देखेको कुराले बिपनामा पनि असर गर्छ भन्ने बिश्वास गरिन्छ । परापुर्वकाल देखि सपनाको आधारमा शुभ हुने वा अशुभ हुने भविष्यबाणी गरिंदै आएको छ ।
आज हामी बिभिन्न यौन सम्बन्धी सापनाको बारेमा कुरा गर्छौं स् आफ्नो पार्टनरसँगस् आफ्नै पार्टनर लोग्ने स्वास्नी वा प्रेमी प्रेमिका बीच यौन सम्पर्क भएको सपना देख्नु भनेको कि तपाईहरू बीच एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ अथवा तपाईले आशा गरे अनुरुपको यौन सुख प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन् ।
यदि तपाईले सपनामा पनि बिपनामा गरेकै जस्तो यौन सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई बधाई छ, तपाईहरू बीचको सम्बन्ध एक दमै राम्रो रहेछ । यदी सपनामा गर्ने यौन क्रिडा बिपानामा गर्ने संभोग भन्दा भिन्न खालको छ भने तपाईमा यौन सम्बन्धी कुनै अतृप्त इच्छा रहेका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तो अबस्थामा तपाईले आफ्नो पार्टनरसंग तपाईले देखेको सपना सम्बन्धी कुरा गरेर सपनामा गरेको जस्तै यौन सम्पर्क गर्ने सहमती गर्न पनि सक्नु हुन्छ ।
यसरी तपाईले आफ्नो अतृप्त चाहना पनि पूर्ण गर्न सक्नु हुन्छ । पूर्व पार्टनरसँग यदि तपाईले सपानामा आफ्नो पूर्ब पार्टनर पूर्व गर्लफ्रेण्ड र ब्वाइफ्रेण्ड वा पतिरपत्नी संग संभोग गरेको सपना देख्नुहुन्छ भने तपाईले पूर्ब पार्टनरसंगको यौन मिस गरिरहनु भएको छ।
तपाईंले अवचेतन रूपमा आफ्नो नयाँ पार्टनरलाई पूरानो पार्टनरसंग तुलना गरिरहेरको पनि हुन सक्छ । यदी तपाई अहिले एक्लै हुनुहुन्छ भने तपाईले पार्टनर भन्दा पनि बढी संभोग मिस गरेको पनि हुन सक्छ ।
सपनाका बारेमा थप कुरा यस्तो छ ।
यदि तपाईं सपनामा पति र पत्नी वा लभरका साथ संभोग गरेको देख्नुहुन्छ भने यसका दुई फरक अर्थ हुनसक्छ । पहिलो तपाईंहरुको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । दोस्रो अर्थ हुनसक्छ, तपाईं आफ्नो पार्टनरबाट त्यो सबै पाइरहनु भएको छैन, जुन तपाईं चाहनुहुन्छ । यदि यस्तो सपना देखिन्छ भने एक पटक आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गरेर कारण जान्ने कोशिस गर्नुपर्दछ ।
यदि तपाई आफ्नी पूर्व गर्लफ्रेण्ड वा ब्वाइफ्रेण्डका साथ सेक्स गरेको सपना देख्नुभयो भने यसको मतलब हुन्छ, पूरानो प्रेमी र प्रेमिकासँग तपाईंको संभोग लाइफ एकदमै आनन्ददायक थियो होला । वा फेरि पनि हुन सक्छ होला ।
हुन सक्छ, तपाईंले आफ्नो नयाँ पार्टनरसँग पूरानो पार्टनरको तुलना गरिरहनुभएको छ । यदि तपाईसँग अहिले कुनै पार्टनर नै छैन भने त्यसको फरक अर्थ छ, तपाईंको अवचेतन मनल कि त संभोग मिस गरिररहेको छ कि पुरानो पार्टनर ।
मन परेको स्टारसँग
यदि तपाईंले कुनै मनपर्ने सेलिव्रिटी वा स्टारसँग संभोग गरेको सपना देख्नुभयो भने त्यसको मतलब हो, या तपाईं आफ्नो पार्टनरमा सेलिव्रिटीजस्तै कुनै चिज खोजिरहनु भएको छ । वा, तपाईं उक्त स्टारको लुक र सफलता आफ्नो पार्टनरको खुबीमा मिलाउन थाल्नुहुन्छ।
समलिङ्गीसँगयदि तपाईंले समलिङ्गीको साथ अन्तरंग सम्बन्ध बनाउदै गरेको सपना देख्नुभयो त्यसको अर्थ हुन्छ, तपाई संभोगमा हुनुहुन्न । यदि तपाई पुरुष हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो संभोग पार्टनर पुरुष बनाउँदा आनन्दायी हुन्छ भन्ने सोच छ भने त्यो तपाईको भ्रम मात्र हो ।यदि यस्तो खालको सपना तपाई बारम्बार देख्नुहुन्छ वा तपाईलाई साच्चिकै आफू समलिङ्गीप्रति आक्रषित महुसस गर्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ हो,तपाईले संभोगको प्राथमिकताका बारेमा फेरि तपाईले पुर्नविचार गर्नुपर्छ । यस्तो खाले सपनाको अर्को हिसाबले यो पनि अर्थ हुनसक्छ,तपाईको पार्टनरले तपाईप्रति अरु केयरिङ वा विनम्र व्यवहार खोजिरहेको छ ।आफ्नो पार्टनरलाई धोकायदि तपाईं सपनामा आफ्नो पार्टनरलाई धोका दिइरहनु भएको छ भने यसको मतलब हुन्छ तपाईंको सम्बन्धमा दरार आउदैंछ । यो सपना तपाईंका लागि निकै डिस्र्टबिङ हुन सक्छ । यो सपना त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला तपाईको रिलेशनमा कोही ठूलो परिवर्तन हुँदैंछ । यस सपनाको मतलब हुन तपाईं आफ्नो जीवनमा हुने ठूलो परिवर्तनबारे अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । र, सोच्दैं हुनुहुन्छ तपाईं भविष्यमा हुने घटनाको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने ?यो सपनाको दोस्रो अर्थ हुन्छ, तपाईं तपाईको पार्टनरसँग पर्याप्त समय पाइरहनु भएको छैन । र, तपाईंको पार्टनरका साथ इमोशन बिल्डिङ जरुरी छ ।
पत्रकार रबि लामिछाने लाई जेल हाल्नु पर्छ !